I-welding ekumgangatho ophezulu inokufezekiswa kuzo zombini iipleyiti ezibhityileyo neziphakathi
Inverter DC ukubetha kwe-TIG kumatshini wokuwelda we-VRTP400 (S-3)
Umatshini wokuwelda we-TIG I-VRTP400 (S-3), inemisebenzi etyebileyo neyohlukeneyo yemowudi yokubetha, enokufikelela ngcono ukuwelda ngokwemilo yomsebenzi;
Umatshini wokukhuphela i-TIG 400TX4
Ukutshintsha imo ye-TIG ye-welding nge-4, ukulungelelanisa ulandelelwano lwexesha ngo-5.
2.Ukuhamba kwegesi kunye nexesha lokuhamba emva kwexesha, amaxabiso akhoyo, ukubetha kwamaza, umjikelo womsebenzi kunye nexesha elithambekileyo unokulungiswa xa kukhethwe iCrater On.
Uluhlu lokuhlengahlengiswa kwesantya sokubetha ngu-0.1-500Hz.
IWotter yokusebenzela iwelding / isikhululo somsebenzi weerobhothi
Indawo yokusebenzela iirobhothi Ingasetyenziselwa ukuvelisa, ukufakela, ukuvavanya, ukulungiswa kwempahla kunye nezinye izixhumanisi zemveliso, kwaye zisetyenziswa kakhulu kwizithuthi zeemoto nakwizinto ezizenzekelayo, oomatshini bokwakha, oololiwe, izixhobo zombane ezisezantsi, umbane, izixhobo ze-IC, icandelo lezomkhosi, icuba, ezemali , amayeza, ukunyibilikisa isinyithi, ushicilelo kunye nokupapasha amashishini anoluhlu olubanzi lwezicelo…
Inkqubo ye- iwelding indawo yokubamba iirobhothiyinxalenye ebalulekileyo yomtya wokuvelisa iirobhothi kunye nokuguquguquka kwe-welding kunye neyunithi. Izixhobo zinesakhiwo esilula kwaye zinokujikeleza okanye ziguqulele indawo yokusebenza e-welding iyeyona ndawo ifanelekileyo yokuwelda. Ngokwesiqhelo, irobhothi yokunyibilikisa isebenzisa izikhundla ezibini, enye yeyokunyusa enye inqaku lokulayisha nokukothula indawo yokusebenza.
Ukuphatha ingalo yeRobot, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo,